Fasaxa Kirismaska ​​ee dugsiga ayaa imanaya, sida loo abaabulo waqtiga? | Ragga Stylish
Fasaxa Kirismaska ​​ee dugsiga ayaa ka mid ah xilliyada la filayo carruurta. Marka laga reebo dhigista shaqada guriga dhawr maalmood, sidoo kale waxay lamid tahay baashaal, hadiyado, socod, iwm.
Xaqiiqda taas guriga ugu yar ayaa ka maqnaada dugsigaTaas macnaheedu ma aha in waalidku sidoo kale leeyihiin maalmo fasax ah, oo ka baxsan shaqada.
1 Qorshaha A: Awooweyaasha
2 U gee xafiiska?
3 Fasaxyada iskuulka waxaa leh qof walba
4 La wadaag daqiiqado tayo leh
5 Aqoon isweydaarsi tiyaatar ah?
6 Internetka, oo ay kormeerayaan
Qorshaha A: Awooweyaasha
Waalidiin badan ayaa leh nasiib u lahaanshaha waalid ama walaalo si ay u caawiyaan xilliyada ciidaha. Intaas waxaa sii dheer, awooweyaal iyo adeero (oo leh awood iyo waqti) waxay ku raaxaystaan ​​daryeelka carruurta ay sii dhaleen iyo kuwa ay ilma adeerka u yihiin.
Qaarkood maalmood oo ay weheliyaan awooweyaal iyo ayeeyooyin waxay noqon karaan daqiiqado carruurtu waligood xusuusan doonaan. Oo hadday jiraan ilma adeerro, xitaa ka sii wanaagsan.
U gee xafiiska?
Tani waa ikhtiyaar aysan cid waliba haysan. Waxay kuxirantahay doorsoomayaal badan, oo aan had iyo jeer ku ciyaarin danahaaga.
Kuwa awood u yeelan kara raaxadan oo waliba mas'uuliyadoodu u saamaxeyso, waa fikrad in laga fiirsado. "U shaqo tagista Aabbe" waa waayo-aragnimo xiiso u leh carruur badan.
Fasaxyada iskuulka waxaa leh qof walba
Saaxiibbadaada, iyo sidoo kale waalidiinta carruurtaada saaxiibadood, waxay u badan tahay inay la kulmaan isla caqabadan maalmahan. Haddii ay jirto heer kalsooni ku filan, Dadka waaweyni markooda way kala wareegi karaan si ay u qaybiyaan daryeelka carruurta yar yar.
La wadaag daqiiqado tayo leh
Hawlaha caadiga ah qaarkood, ee ku jira caadooyinka kirismaska, sii waalidiinta fursad ay kula qaataan daqiiqado tayo leh "yaryarkooda". Isku soo uruurinta iyo qurxinta geedka, iyo sidoo kale dhigista muuqaalka dhalashada, waa laba ka mid ah.
Aqoon isweydaarsi tiyaatar ah?
In kasta oo aysan u badneyn sida xilliyada fasaxa xagaaga, inta lagu jiro fasaxyada dugsiga Kirismaska, Magaalooyin badan, howlo sida aqoon isweydaarsiyo tiyaatarka ama farshaxanno ah ayaa la abaabulaa.
Internetka, oo ay kormeerayaan
Barnaamijyada qaarkood ee loogu talagalay carruurta ayaa ah qalab aad waxtar u leh inta lagu jiro maalmahan. In kasta oo jawiga ugu habboon ay ka mid tahay dibedda qoysku si ay u taratamaan ama ugu raaxaystaan ​​bandhigyada xilligan, dhowr saacadood internetku wuxuu kuu noqon karaa saaxiibkaaga ugu fiican.
Ilaha sawirka: Hadal anda Toos / Adduunyada
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Shaqada iyo iskuulka fasaxa kirismaska, sida la iskugu daro
Shan qaybood oo gaar ah si aad u dhammaystirto ururinta aasaasiga ah